Ciidamada itoobiya oo Saddex Askari oo Kenyan ah ku Toogtay Xadka labada dal, – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaCiidamada itoobiya oo Saddex Askari oo Kenyan ah ku Toogtay Xadka labada dal,
Ciidamada itoobiya oo Saddex Askari oo Kenyan ah ku Toogtay Xadka labada dal,
21/11/2015 Mohamed Abdi Saney Wararka Soomaalia 0
Ciidamada Itoobiya ayaa Toogasho ku dilay Saddex Askari oo ka Tirsan Ciidamada dalka Kenyan ah Xadka kala qeybiya labada dal, Gaar ahaan deeganka Marsabit. Halkaaso Xiisad Coladeed.
Taliyaha Booliska deegaanka Marsabit Mark Wanjala ayaa sheegay in askarta la diley ay roondo ku jireen xilliga ay askarta Ethiopianka ay toogteen.
Inta aan la toogan askartan ayaa la sheegay in iskahorimaad uu ku dhex maray xadka Kenya iyo Itoobiya ciidamada OLF iyo ciidamada Itoobiya.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in caaqil lagu magacaabi jirey Guyo Harake lagu diley Khamiistii xadka iyadoo iska horimaadka OLF iyo ciidamada Itoobiya uu gudaha u galay illaa 8km.
Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inay ka soo gudbeen xadka dalka Kenya ayna gudaha u soo galeen dalka Kenya gaar ahaan Moyale iyo Sololo shan jeer intii u dhexeysay March iyo November.
Dowlada Kenya ayaa cabasho u gudbisay dowlada Itoobiya soo gelitaanka ay ciidamadooda gudaha u soo galeen dalka Kenya.
Ugaas Cabdiraxmaan iyo Waxgaradka Gobolka Hiiraan oo ku Guuleystay in Markale dib loo furo wada laamiga ee Baladweyne
Belgium Oo Xaqiijisay Amaanka Wadanka Si aaysan Wax U Dhicin